ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
AOX-မေး စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuaသို့r နိုင် ဖြစ် အသုံးချ သို့ အဆိုပါ လြှောကျလှာ လိုအပ် အချိုးကျ ထိန်းချုပ်မှု, နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque နှင့် အကွာအဝေး ၏ 50N.m ~ 6000N.m.The လေးပုံတပုံ-အလှည့် ထုတ်ကုန် များမှာ ခွဲခြား inသို့ ကွဲပြားခြားနားသော ကဏ္ဍများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် အဆိုပါ သမားရိုးကျ စီးရီး (AOX-R, AOX-မေး စီးရီး) နှင့် explosion-pro၏ စီးရီး. အားလုံး အဆိုပါ စီးရီး များမှာ ရေးစပ် အားဖြင့် အဖွင့်အပိတ်, ပြောင်းလဲပစ် နှင့် ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuaသို့r. ကျော်လွန် အဆိုပါ အနှစ် က hအဖြစ် အတွေ့အကြုံရှိ အမျိုးမျိုးသော လယ်ကွင်း ၏ နိုင်ငံတွင်း နှင့် နိုင်ငံခြားရေး စျေးကွက် လေ့ကျင့်သည် နှင့် လြှောကျလှာ စဉ်တွင် ဆည်းပူး အဆိုပါ ဆုလာဘ် ၏ မျိုးစုံ အမျိုးသားရေး နှင့် interအမျိုးသားရေး အရည်အချင်းများ။
တွင်ခြင်းနှင့်အမျိုးအစား / Intelligent type ကိုပြောင်းလဲပစ် / ချွတ်ထိန်းချုပ်ရေးmethodï¼
ထိန်းချုပ်ရေး Mode ကို: တွင်-off signal ကိုထိန်းချုပ်မှု, Module (အချိုးကျစည်းမျဉ်း) ထိန်းချုပ်မှု, Fieldbus ထိန်းချုပ်ရေးစသည်တို့ကို
တွင်-ပယ်ထုတ်လွင့်အမျိုးအစား: ဆက်သွယ်ရန် signal ကို။ သွေးခုန်နှုန်း signal ကို
6000Nm မှ 50Nm actuatorfrom AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့်အဘို့ 1. အမျိုးမျိုးသော output ကို torque ။
AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator များအတွက် 2. သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအဖုံးသော့ခလောက်
အဖုံးနှင့်အိုးအိမ်များအကြား 3. Tapered interface ကို: ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အိမ်ရာကနေလွယ်ကူသောရုတ်သိမ်းအဖုံးဖွင့်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာများ 300 အစုံ, ပစ္စည်းကိရိယာများအာမခံတံ့သောလူသိများတဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ, မြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားအပြောင်းအလဲနဲ့တိကျမှန်ကန်မှုထံမှဝယ်ယူနေကြသည်ထက်အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာ, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်ခြင်း machine.More ပါဝင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ရဲ့အရည်အသွေးကို။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အသိဉာဏ်မော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှား ASIA မှရေ, ထိုင်း THAIWATER အတွက်, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
မေး: လက်ခံနိုင်ဖွယ်အသိဉာဏ်မော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ၏နမူနာအမိန့်လား?
A: ဟုတ်ကဲ့, သင်တန်း, သငျသညျအသှေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ငါတို့ထံမှနမူနာအမိန့်ပေးနိုင်သည်။
Q: AOX-မေးစီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းကော?
A: ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်တော်တို့ဟာဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုများနှုန်းအဖြစ်အထူးထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်, profeesional အင်ဂျင်နီယာများအသင်းရှိသည်။
hot Tags:: ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
သေးငယ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ရေ အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
module လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator